महिला | यस अनन्त ब्रह्माण्ड
पोस्ट महिला . ठाउँ . म्याट्रिक्स
रंग आगो र प्रतिभा को प्रकाश मा
- को Sun. भन्दा मलाई कुनै dearer, कुनै.
प्रेमले हामीलाई सबै बाल्यकाल देखि भरिन्छ
र त्यो ग्रहहरू को ताल नियन्त्रण.
आफ्नो न्यानो, म खुसीले गदगद प्रेम.
र हामी कुनै पनि अब छ trample.
पुजारी, अगमवक्ता र कवि
यो प्रत्येक पहिचान गर्न सक्षम हुनेछ.
सबैलाई जीवन दिन्छ र समय छोडूँगा छैन,
उद्धार आउन समय छ र.
आन्दोलनहरु ताल – र मार्शल नाम -
हामीलाई प्रकाश दिन्छ – बढाउनका दोस्रो मौका.
त्यसैले प्रकाश सधैं चमकता गरौं
प्रेमको तपाईंको नजरमा. यो समयमा
जीवन, आनन्द, आनन्द र सफलता
म्याट्रिक्स अवशोषित – आफूलाई एक ग्रह सहन.
(मेरिना Tsvetaeva दिनुभयो)
महिलाले म्याट्रिक्स आधारमा सिर्जना गरिएको थियो. यो केही संरचना छ, जसमा तपाईं प्रविष्टिहरू बनाउन सक्छ, जानकारी प्रविष्ट, स्टोर जानकारी: संरचना उत्पन्न समाधान भण्डारण को संभावना प्रदान गर्दछ, formalized परिणाम. यहाँ निश्चित छ.
यो पनि पुरातन पदहरूमा उल्लेख गरिएको छ, एक महिला भनेर – यो pitcher, कप, concavity.
जबकि मानिस खोज्दैछ, गठन, विभिन्न आकार र प्रकारका डाटा खनन – महिला सङ्कलन र पसलहरु. महिला को मुख्य कार्य: भण्डारण र रूपमा सही सकेसम्म उपलब्ध जानकारी हस्तान्तरण, विषयगत संपर्क को संग्रह.
कार्य नामित को सद्गुण र विशेष उद्देश्य महिला द्वारा जीव को उपयुक्त विशेषताहरु छ. जो एक छ “unruly सदस्य”. के, बारी मा,, यो पटक-पटक सूचना गर्न अनुमति दिन्छ, लगभग लत्तो बिना. महिला शरीर ताकत कक्षहरूको एक अपेक्षाकृत ठूलो संख्या छ.
एक महिला सधैं थप र थप नयाँ जानकारी प्राप्त गर्न tends, यो कहीं सङ्कलन (र, पनि, जहाँ यो असम्भव छ). किनभने कुन कहिलेकाहीं एकदम साधारण छैन परिस्थिति मा हुन्छ, “rake” कि, नियम, त्यसपछि यो पुरुषहरु को लागि आवश्यक छ.
कहिलेकाहीं महिला जिज्ञासा यस्तो ठूलो डिग्री छन्, कि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यो सम्पूर्ण ग्रह हुन सक्छ. कि पछि त्यो अक्सर सहायता प्रदान गर्न परिणामस्वरूप उथलपुथल बाहिर प्राप्त गर्न इन्कार. यो आफ्नो दोष अस्वीकार र गलतफहमीले को उपस्थिति दिन धेरै सजिलो छ, गम्भीर ले भन्दा, जसले उद्धार गर्न आए.
महिला यो तयार जानकारी लिन खोज्ने, पहिले नै गठन समाधान, अवस्थित सुविधाहरु. सिद्धान्त मा,, महिला जानकारी सङ्कलन र disseminating मा बराबर कुनै छ. यस्तो महिलाहरु.
प्रभाव मा एक कारण छ, महिला ऊर्जा एक अपेक्षाकृत ठूलो रकम छ. जो स्टक मानिसहरू उच्च छ. ठीक किनभने यो महिला काम धेरै गर्न सक्षम छ. आफ्नो कार्यहरूको परिणाम कुनै-brainer. त्यो समस्या हुन सक्छ.
जब समस्या मा एक महिला हुन्छ – यसलाई चाँडै अन्त प्राप्त गर्न tends. र, यदि अन्तमा लायक बोर्ड छ – महिला यो बोर्ड मा चाँडै तोड्न खोज्ने. यसरी कतै समस्याहरूको बाट गिरावट तोड्न. यो महिला एक मानिस बिना सामान्य जीवन बिताउन सक्षम छैन.
आफै, महिला राम्रो सरल धोका. र यो सजिलै र बाध्य गर्छ. सबैभन्दा रहस्यमय महिला र जादुई lodges गर्न आकर्षक. अविश्वसनीय र अपेक्षित परिणामहरू. उदाहरणका लागि: “हामी आफ्नो डीएनए कार्यका सञ्चालन हुनेछ, र तपाईं जादू र अविश्वसनीय को संसारमा प्रवेश!” फलस्वरूप, 70% शरीर गायब, र महिला अविश्वसनीय विश्वास नलाग्दो लावा जोडतोडले छ. र यदि मानिसहरू आफ्नो महिला ख्याल छैन – तिनीहरूले पनि यसको लागि डुबुल्की मार्न. यसरी सम्पूर्ण सभ्यता को अविश्वसनीय slags झूटा आध्यात्मिकता मा जादुई पौडनु बनाउँछ.
कुनै पनि महिला, साथै म्याट्रिक्स रूपमा, समावेश, यसलाई भरिएको भन्दा. एक महिला प्रेम भरिएको यदि, वस्तुहरु प्रेम समावेश, सूचना भिगो र प्रेम सिर्जना – त्यसपछि महिला प्रेम radiates. र त्यो धेरै राम्रो गर्छ. तर, एक महिला जंक जानकारी भरिएको छ भने, inferiority को स्क्रापहरू – एउटै फोहोर र ऊर्जा यसलाई वितरण हुनेछ.
चिकित्सा, त्यहाँ दबाइ निर्भरता उपचार को एक अभ्यास छ. यो व्यवहार मा महिला आफ्नो सर्वश्रेष्ठ मा छैन साबित. मानिसहरू एक रिकभरी अवस्थामा छ भने – यो समस्या महिला. जानकारी को स्थिरता को कंकाल छैन यो कारण छ. अर्थात्. महिला ऊर्जा धेरै समावेश, तर सानो जानकारी स्थिरता. यस, महिला परिमार्जन गर्न सजिलो छन्.
तिनीहरूले quantify झुकाउ छन्, कि प्रकृतिका तिनीहरूलाई peculiar छ. लेखा, अनुमान, सभा र अन्य गतिविधिहरु. एक ठूलो संख्या संग सम्बन्धित छन् ती “भारी छैन” वस्तुहरु.
म्याट्रिक्स, जीवन प्रकारका एक विशाल संख्या समावेश, यो ग्रह प्रतिनिधित्व. सारांश निश्चित सिद्धान्त कुनै पनि महिला Energy- ग्रह छ. यो, यो तर्क गर्न सकिन्छ, स्त्री – यो ग्रह.
कसरी ग्रह, आफ्नो कक्षा मा सार्ने, एक Transcendental ऊर्जा स्तरमा महिला एक सर्कल वा घन्टी छ.
महिला – विश्व को एक निरंतर ऊर्जा प्रवाह, जसमा यो छ. महिला चासो को सतह manifestations भन्दा, किनभने उनीहरू प्रयोगको लागि तयार छन्: तिनीहरूले पहिले नै म्याट्रिक्स थप गर्न सकिन्छ.
महिला – एक म्याट्रिक्स. यसको मुख्य उद्देश्य – स्टोर र रे आमाले प्रेम.
एक महिला अनिश्चितकालीन बधाई सक्नुहुन्छ. अब अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको द्वारा अपनाए 8 मार्था, तपाईं अझै पनि कल गर्न सक्छन् “अनन्त मार्च”, जो यो दिनमा बधाई संख्या अनुरूप छ.
स्वायत्त विनियमन सिद्धान्त